Dalkii 7-aad oo Muslim ah oo Imaaraadka ku eedeeyay inuu ku hayo FARAGELIN ba’an (Imaaraadka oo wixii uu Somalia ku hayay…) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalkii 7-aad oo Muslim ah oo Imaaraadka ku eedeeyay inuu ku hayo...
Dalkii 7-aad oo Muslim ah oo Imaaraadka ku eedeeyay inuu ku hayo FARAGELIN ba’an (Imaaraadka oo wixii uu Somalia ku hayay…)
(Rabaad) 27 Agoosto 2019 – Dalka Marooko ayaa Imaaraatka ku eedeeyay inay taageeraan jabhadda Bulsaariyo Front ee la dagaallanta dowladda dakaasi, iyagoo doonaya inay gobolka Western Sahara ka gooyaan Marooko inteeda kale, sida uu faafiyay Al-Quds Al-Araby.
Marooko ayaa ka carootey in hoggaamiyaha jabhadda Bulsaariyo ee Ibrahim Ghali, uu kasoo muuqday hilinka Al Xurra ee Maraykanku leeyahay, balse fadhigiisu yahay Imaaraadka.
Sida ku dhigan Al-Quds Al-Araby, Marooko ayaa rumaysan in Imaaraadku uu iyaga ku ciqaabayo inay dhegaha ka furaysteen soo jeedintii Sucuudiga iyo Imaaraadka ee lagu go’doominayay dalka Qadar, taasoo socotey tan iyo 2017-kii.
Webka Adar ee fadhiggiisu yahay Marooko ayaa sheegay in uu saraakiil sare oo dalkaa ah kasoo xigtey in Imaaraadku uu iska dhaadhiciyay inuu dalkaa ku rakaatayn karo taageero uu u muujiyo jabhadda Bulsaariyo isagoo ku taageeraya lacag iyo hub.
Waa dalkii 7-aad oo Muslim ah oo Imaaraadka ku eedeeynaya inuu arrimohooda faragelinyo, waxay kuwa kale kala yihiin Somalia iyo Yaman oo ay sidan oo kale doonayaan inay kala qaybiyaan iyo Libya iyo Tuniisiya.
Halka Pakistan ay Imaaraadka ku tuhunsan tahay inuu dhiirri gelin ku siinayo xasuuqa iyo go’doominta ay Hindiya ka waddo gobolka Kashmiir qaybta ay xukunto, iyadoo maalin dhowayd billadda ugu sarreeysa siisay RW Hindiya ee Modi.
Previous article”Ninkaygu wuxuu iga raacay Ilhaan Cumar!” – Dokumentiyo furriin dalab ah oo la helay + Muuqaal & Sawirro
Next articleKenya ‘destroying mobile phone masts in Somalia’